Virus History ( Part - 1 ) ဗိုင်းရပ်စ် သမိုင်းကြောင်း အပိုင်း - ၁ | Myanmar Black Hacking
0 Virus History ( Part - 1 ) ဗိုင်းရပ်စ် သမိုင်းကြောင်း အပိုင်း - ၁
ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဘယ်ကနေစပြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ သမိုင်းကြောင်းကို အပိုင်း ၄ပိုင်းခွဲပြီးတင်ပေးမှာပါ
ခုကတော့အပိုင်း (၁) ကိုအရင်တင်ပေးမှာပါ
ဒီအကြောင်းအရာတွေကို မဖတ်ခင်မှာ "Virus ဆိုတာ self- replication computer program တစ်ခုဖြစ်ပြီး အခြား executable code (သို့) documents များထဲကို သူ့တို့ကိုယ်သူတို့ copy ကူးထည့်ခြင်း အားဖြင့် ကူးစက်ပြန့်နှံ့ စေတာဖြစ်တယ်" ဆိုတဲ့ အချက်ကို မေ့လို့ မဖြစ်ပါဘူး... အဲဒီ အချက်ကိုမေ့နေမယ်ဆိုရင် ဒီ Post ကို နားမလည်နိုင်ပါဘူး... ကူးစက်ခြင်းအဆင့်ဆင့်ကို " Virus ဖန်တီးခြင်း (၁)၊ (၂)၊ (၃)" မှာ ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ"....Virus သမိုင်း အစမှာဆိုရင် ပထမဆုံး" ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ Virus အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွေဟာ အဆုံးမရှိထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၁၉၇၀ ၀န်း ကျင်လောက်မှာ malware တွေ attack လုပ်ခဲ့ကြလို့ပါ...အချို့သူတွေက ဒီ malware တွေ attack လုပ်ခဲ့တာကို ထပ်သွင်း ရေတွက်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်...malware လို့ဆိုပေမယ့် ယေဘူယျသတ်မှတ် ချက်အရ ပြောရရင်worms တွေဖြစ်ကြပြီး virus တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး... ဒါကြောင့် ၁၉၇၀ အစောပိုင်း ပေါ်ထွက်ခဲ့ တာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်...သို့သော်လည်း Computer Knowledge ပိုင်းကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ Virus တွေရဲ့ သမိုင်းဟာ ၁၉၈၁ မှာစတင် ခဲ့တယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ် ။
၁၉၆၀နှောင်းပိုင်း - ၁၉၇၀ အစောပိုင်းနှစ်များ
၁၉၇၀ အဦးပိုင်းမှာ Arpanet (Advanced Research Projects Agency net) ကနေပြီး Creeper လို့ ခေါ်တဲ့ worm တစ်ခုကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်...ဒီ worm ကို Tenex operating system အောက်မှာ global computer networks များဆီသို့ သူဟာသူပျံနှံ့နိုင်အောင် ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်...၄င်းဟာ သူ့ဟာသူ modem ကနေတဆင့် network တစ်ခုဆီရောက်အောင် ၀င်နိုင်စွမ်းရှိပြီး remote systemများဆီကို သူ့ကိုယ်သူ copy လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကူးပြောင်းပါတယ်...သူက တခြား system တစ်ခုထဲရောက်သွားပြီးဆို ရင် "I'M THE CREEPER : CATCH ME IF YOU CAN" ဆိုတဲ့ message လေးဖော်ပြတတ်ပါတယ်... သူနဲ့ ကပ်လျက်ပဲ program လေးတစ်ခုထပ်ထွက်လာပါတယ် အဲဒါကတော့ Creeper ကို နှိမ်နင်းမယ့် Reaper ပဲဖြစ်ပါတယ်... Reaper က Creeper ကိုလိုက်ရှာပြီး delete လုပ်ပါတယ်... အားလုံးသိကြတဲ့ "ပထမဆုံး" Anti-virus progam လို့ ပြောရမှာပါပဲ...
၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာ ထပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ malware တစ်ခုကတော့ Rabbit လို့ခေါ်ပါတယ် ... သူကတော့ system တွေကို crash လုပ်ဖို့အတွက် သူကိုယ်သူ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပုံတူပွား နိုင်ပြီး အများအားဖြင့်တော့ system တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို သူ့ကိုသူ copy မလုပ်နိုင်ပါဘူး...၄င်းက system resources တွေမှာ ခိုအောင်းနေပြီး system ရဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုတွေကို နိမ့်ဆင်းသွားအောင် လုပ်ပါတယ်...
၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာတော့ UNIVAC 1108 system အတွက် Pervading Animal လို့ခေါ်တဲ့ game တစ်ခုရေးခဲ့ပါတယ် ...အဲဒီ game က user ကို စိတ်ဝင်စားအောင် မေးခွန်းတွေမေးပြီးတော့ user တွေးနေတဲ့ သတ္တ၀ါက ဘာလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ် .... ဒါပေမယ့်လည်း ဒီ game က တကယ်ဖြစ်နေတာ ကတော့ file တိုင်းမှာ သူကို့သူ ရေးထည့်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပြီး file တွေထဲ ရေးပြီးပြီလား မရေးရသေးဘူးလားဆိုတာ ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် အချိန်တွေကို ဖန်တီးပြောင်းလဲယူဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်... executable file တွေနဲ့ အဆုံးမှာ သူဟာသူရောနှောပေါင်းစပ်လိုက်ပါတယ်..ဒါဟာ Trojan ရဲ့ အပြုအမူတွေဖြစ်အောင် တမင်လုပ်ခဲ့တာလား ... မတော်တဆဖြစ်ခဲ့တာလားဆိုတာကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး...ဒီအပြုအမူတွေဟာ ယခုခေတ်ပေါ် ထောင်ပေါင်းများစွာသော Trojan များနဲ့ တူညီနေပါတယ်....JÃrgen Kraus ရဲ့ master thesis မှာတော့ ဒီ Program ကို Selbstreproduktion bei Programmen( Self-reproduction of programs) လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်...
ဒီနှစ်ပိုင်းတွေကို ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ Computer တွေဟာ ပိုပို ပြီးတော့ လူသုံးများလာကြပါတယ်...program အရေအတွက်အနေနဲ့ software company တွေကနေထုတ်တာ မဟုတ်ပေမယ့်လည်းပဲ တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုဟာ ပိုပြီးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်....ဒီ Program တွေကို general access servers- BBS တွေကနေ တိုက်ရိုက် ဖြန့်ဝေခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်းတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်... အဲဒီရလဒ်ဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ Trojan horses တွေ၊ System ကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့ Program တွေ အမြောက်အမြားထွက်ပေါ်လာဖို့ အတွက် လမ်းစဖြစ်ခဲ့ပါတယ်....
၁၉၈၁ - Wild ထဲမှ ပထမဆုံး Virus
Robert Slade ရဲ့ သမိုင်းဖော်ပြချက်အရဆိုရင်.. ယနေ့ခေတ် Virus များကဲ့ သို့ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Wild ထဲကို စမ်းသပ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ Virus လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်.. Texas A&M University ကနေစတင် ပျံနှံ့လာတယ်လို့ အများက လက်ခံထားပါတယ်... အဲဒီ Virus နဲ့ နာမည်ကတော့ "Elk Cloner" ဖြစ်ပြီး ပျံ့နှံလွယ်တဲ့ Bootable virus ဖြစ်ပါတယ်...Apple II computer များကို တိုက်ခိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်... diskettes ရဲ့ boot sector က call တွေရှိလာတဲ့အခါ သူကိုယ်သူ တွဲဆက်လိုက်ပါတယ်...အဲဒီ Virus ၀င်ပြီဆိုရင် ဒီလိုစာသားလေးတွေ screen မှာဖော်ပြပါတယ်.....
၁၉၈၃ - ပထမဆုံး Virus စမ်းသပ်ချက်စာတမ်း
Fred Cohen က ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ Computer Virus - Theory and Experiments ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို တင်သွင်းခဲ့ပြီး computer virus တွေကို အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ခြင်း နဲ့ သူရဲ့ စမ်းသပ်တွေ့ရှိမှုတွေကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်...သူရဲ့ စာတမ်းမှာ...
" On November 3, 1983, the first virus was conceived of as an experiment to be presented ataweekly seminar on computer security. The concept was first introduced in this seminar by the author, and the name 'virus' was thought of by Len Adleman. After 8 hours of expert work onaheavily loaded VAX 11/750 system running Unix, the first virus was completed and ready for demonstration. Withinaweek, permission was obtained to perform experiments, and5experiments were performed. On November 10, the virus was demonstrated to the security seminar."
Virus နာမည်ကတော့ "Brain" ဖြစ်ပြီးတကမ္ဘာလုံးကို ပထမဆုံးစတင်ပြန်နှံ့ ခဲ့တဲ့ IBM PC viurs ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Virus ဟာ 360 KB diskettes တွေထဲမှာ စတင်ပြန့်နှံ့ ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တခဏချင်းဆိုသလိုပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါးပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်...ဒီ Virus အောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့ လျှို့ ၀ှက်ချက်ကတော့ computer အသိုင်းအ၀ိုင်းက လုံးဝအဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့ အချိန်မှာ အခုလိုမျိုးအံ့သြဖွယ်လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်... ဒီ Virus ကို တီထွင်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ ပါကစ္စတန် မှ Basit Farooq Alvi နဲ့ Amjad Farooq Alvi ဆိုတဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး floppy disk ရဲ့ boot sector တွေကို analyze လုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် ကူးစက်တဲ့ နည်းလမ်းကိုလည်း တိုးတက်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်...သူတို့က Virus ရဲ့ text message ထဲမှာ သူတို့ရဲ့ နာမည်၊ လိပ်စာ နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုထည့်ထားခဲ့ပါတယ်...ဒီအချက်တွေအရ သူတို့ဟာ ဒီ software ကို တီထွင်သူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့နိုင်ငံကနေ သူတို့ရဲ့ မူပိုင်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြု စေချင်တယ်ထင်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းစွာပဲ သူတို့ရဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေကို ပါကစ္စတန်နယ်စပ်မှာပဲ စွန့်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်... "Brain" ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး ပိရိသေသပ်လှတဲ့ ပထမဆုံး Virus ဖြစ်ပါတယ်... ဒီ Virus ဟာ သူတို့ ၀င်ရောက်နေတဲ့ sector ကို ရှာဖွေဖို့ကြိုးစားကြတဲ့အခါ သူတို့ကို ရှာမတွေ့နိုင်အောင် နဂိုမူလ Virus မရှိတဲ့ အပိုင်းနဲ့ အစားထိုးလိုက်ပါတယ်... တော်တော်လည်တဲ့ Virus ပါပဲ...
ဒီ ၁၉၈၆ ခုနှစ်ထဲမှာပဲ DOS exe များထဲသို့ code များကို ပေါင်းထည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ copy ကူးပြီး ဖန်းတီးနိုင်တဲ့ program တစ်ခုကို Ralph Burger ဆိုသူ Programmer တစ်ယောက်က ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်... အဲဒီ Programmer က သူရဲ့ ပထမဆုံး Virus လေးကို "VirDem" လို့ အမည်ပေးခဲ့ ပြီး ဒီ Virus ရဲ့ စွမ်းရည်သရုပ်ပြမှုတွေလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်... ဒီ Virus ကို ၁၉၈၆ ဒီဇင်ဘာမှာ hackerများပါဝင်တဲ့ မြေအောက်အဖွဲ့အစည်းcomputer forum တစ်ခုက ကြေငြာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်က အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ VAX/VMS systems ( ဂျာမဏီမြောက်ပိုင်း Hamburg ပြည်နယ်မှ Chaos Computer Club) ကို ဖြိုခွင်းဖို့ ဖြစ်ပါတယ်...
"Vienna" virus ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်... ကျနော်တို့ သိခဲ့ကြပြီးဖြစ်တဲ့ Ralph Burger က ဒီ Virus ရဲ့ copy တစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်... သူက ဒီ Virus ကို တစ်စစီဖြိုဖျက်လိုက်ပြီး ရရှိခဲ့တဲ့ result ကို သူရဲ့ စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ " Computer Viruses:aHigh-Tech Disease" မှာဖော်ပြထားပြီး ပြည်သူများဆီသို့ ဖြန့်ဝေလိုက်ပါတယ်။ သူရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ လူသိများထင်ရှားတဲ့ Virus ရေးနည်းအတွေးအခေါ်များ နဲ့ ဘယ်လိုပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတာတွေကို ရှင်းပြထားခဲ့ပါတယ်...ဒါတွေဟာ computer virus ပေါင်း ရာထောင်ချီပြီး ဖန်တီးစေဖို့အတွက် လှုံ့ဆော်လိုက်တာပါပဲ...သူ့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ အချို့ Idea များ အထမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်...
အဲဒီတစ်နှစ်ထဲမှာပဲ ပထမဆုံး file virus များဖြစ်ကြတဲ့ IBM PC virus များလည်း လွတ်လပ်စွာရေးသား ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်...ထိုvirus တွေကတော့ COMMAND.COM file ကိုသာ ကူးစက်တိုက်ခိုက်တဲ့ "Lehigh" ၊ COM file ကို ကူးစက်တဲ့ "Aprial1st" လို့လည်း သိထားကြတဲ့ "Suriv-1" ၊ EXE ဖိုင်ကို ကူးစက်တဲ့ (ပထမဆုံးအကြိမ် အမြဲတမ်း ကူးစက်တဲ့ )"Surive-2"(Suriv = Virus backward )(ဒီvirus က Jerusalem virus ကိုထွက်ပေါ်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်နာရီကို ပုံတူ ၅၀၀,000ပွားခြင်းဖြင့် ပြန့်နှံ့ ပါတယ်) ၊ COM နဲ့ EXE နှစ်ခုလုံးကို ကူးစက်တဲ့ "Suriv-3" တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်...ဒါ့အပြင်များစွာသော Boot Virus ( USA တွင် "Yale" ၊ နယူးဇီလန်တွင် "Stoned" ၊ အီတလီတွင် "PingPong") နဲ့ ပထမဆုံး self encode file virus ဖြစ်တဲ့ "Cascade" တို့ အသီးသီး ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်..။
IBM Computer များမဟုတ်ကြတဲ့ Apple Macintosh ၊ Commodore Amiga နဲ့ Atari ST တို့လည်း Virus ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်ကူးစက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်...။
၁၉၈၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပဲ REXX language နဲ့ ရေးထားတဲ့ အလွန်ကူးစက်မှုမြန်ဆန်တဲ့ network virus တစ်ခုဖြစ်တဲ့ "Christmas Tree" ဆိုတာပေါ်လာပြန်ပါတယ်.. အဲဒီVirus က VM/CMS operating environments အောက်မှာ သူဟာသူပဲ ပြန်နှံ့ ကူးစက်သွားပါတယ်...ဒီဇင်ဘာလရဲ့ Virus ပျံ့နှံ့တဲ့ ၃ရက်မြောက်နေ့ လောက်မှာပဲ အဲဒီ Virus က အရှေ့ ဂျာမဏီတက္ကသိုလ်တစ်ခုအတွင်းမှာ Bitnet network ဆီသို့ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်... အဲဒီနောက် IBM Vnet ဆီကိုရောက်သွားပါတယ်... ၄ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ ( ဒီဇင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့)မှာ Virusဟာ သူ့ရဲ့ copy တွေ network ထဲမှာ ပြည့်လျှံသွားတဲ့ အတွက် ရပ်တန့်သွားတယ်... အဲဒီအချိန်မှာပဲ virus က သူ့ရဲ့ output image ဖြစ်တဲ့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင် တွေကို စတင်ထုတ်ပါတော့တယ်... အဲဒီနောက် အပေးအယူလုပ်နိုင်တဲ့ system files NAMES နဲ့ NETLOG ထဲမှာ ရှိတဲ့ လိပ်စာတွေနဲ့ network users တွေအားလုံးဆီကို virus က သူ့ဟာသူ copy ကူးပြီး ပို့ပါတော့တယ်........
၁၉၈၈ ရဲ့ ၁၃ ရက်နေ့ သောကြာနေ့မှာတော့ ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းများစွာက ကုမ္ပဏီများ နဲ့ တက္ကသိုလ်များသို့ Jerusalem virus နဲ့အတူ အသိပေးချက်တွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲ virus က run နေတဲ့ file များကို ဖျက်ဆီးနေပါပြီ။ သေချာသလောက်ကတော့ ဒီ Virus ဟာ တမ္ဘာလုံးမှာ အမှန်တကယ်ပျံ့နှံ့ ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး MS-DOS virus တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်..။ ဥရောပ၊ အမေရိက နဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများမှ computer များ ကူးစက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Virus ရဲ့ နာမည်က သူ တိုက်ခိုက်ကူးစက်ခဲ့တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂျေရုစလင် တက္ကသိုလ်ကို ရိုက်ခတ်ခဲ့အပြီးမှာ အမှတ်မထင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုခေတ်ပေါ် anti-virus programs များမဟုတ်ကြတဲ့ anti-virus programs တွေ၊ user ပေါင်းများစွာနဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေတောင် Virus တွေရဲ့ ရှင်သန်မှုကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပဲ Jerusalem virus နဲ့အတူ များစွာသောအခြား virus များ ( "Cascade", "Stoned", "Vienna") တို့ဟာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော computerများကို အမှတ်မထင် ကူးစက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါတယ်...အဲဒီတစ်နှစ်ထဲမှာ ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့ ဂန္တ၀င်computer ဂရုကြီးဖြစ်တဲ့ Peter Norton က ဒီ virus တွေ ထွက်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်...ဒီကြေငြာချက်က စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းပါတယ်...ဒါပေမယ့် အချီးအနှီးတော့ မဖြစ်ပါဘူး... ဘာလို့လဲဆိုတော့ နောက်တချိန်မှာ Symentec ရဲ့ Norton Anti-virus project ကို စတင်ဖို့အတွက် ဖြစ်လာခဲ့လို့ပါ...။
messages အမှားတွေကိုပို့ခြင်းဖြင့် user များအကြား ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရလောက်အောင် ကြောက်ရွံ့သွားစေတဲ့ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့ computer virus အသစ်တွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ... BBS systems ဆီသို့ messages အများအပြား uploaded လုပ်ပြီး virus တွေကို သူ့တို့ကိုယ်သူတို့ copy လုပ်ခြင်းဖြင့် BBS တစ်ခုမှ အခြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ modem ဆီသို့ speed 2400 bund ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ ပထမဆုံး Hoaxes virus တွေဟာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Mike RoChenle ကဆိုပါတယ်...။ အဲဒီခေတ်အခါတုန်းက Hoaxes virus တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာ user တွေဟာ စံသတ်မှတ်ချက်အရ 2000 baund လောက်ကိုပေးလိုက်ရပါတယ်...ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ သူတို့ရဲ့ modem speed ကို 1200 baud လောက်အထိ နိမ့်ဆင်းသွားစေပါတယ်...အလားတူ Hoaxes virus တွေဟာ ယခုခေတ်အထိအောင် ထွက်ပေါ်နေဆဲပါ... Hoaxes virus တွေထဲမှာ အကျော်ကြားဆုံးကတော့ GoodTimes နဲ့ Aol4Free တို့ဖြစ်ပါတယ်... MacMag virus ဟာ Macintosh (Apple PC) တွေပေါ်မှ Hypercard stack virus တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး Macintosh virus လို့ ယေဘူယျအနေနဲ့ ယူဆနိုင်ပြီး Scores virus ကတော့ Macintosh ကူးစက်ပြန်နှံ့စေတဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အဓိက source ဖြစ်ပါတယ်...။ သို့သော်လည်း Apple malware က Macintosh ကို မကန့်သတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး...။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းမှာ Festering Hate ရဲ့ တီထွင်မှုကနေ Apple ProDOS virus ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်...။
၁၉၈၈ နိုဝင်ဘာလမှာတော့ Cornell University မှ ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Robert Tappan Morris ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Internet Worm(Morris network virus ) ဟာ Internet ကို ကပ်ဆိုးကျရောက်စေပြီး computerပေါင်းများစွာကို Shut down ပြုလုပ်သွားပါတယ်...။ USA ( NASA research Institute အပါအ၀င်) မှ Computer system ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော် virus ကူးစက်ပြန့်နှံ့ ခံခဲ့ရပြီး ချက်ချင်းပဲ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်တုံ့ ဆိုင်းသွားခဲ့ရပါတယ်...။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ "Christmas Tree" worm လိုပဲ ဒီ Virus ဟာ တသမတ်တည်းမရှိတဲ့ code တွေကို သူ့ဟာသူ copy ကူးပြီး အခြား network computer များဆီကို ပေးပို့ပါတယ်... ဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့် network resource တွေအားလုံးကို လုံးဝ တုံ့ဆိုင်းရပ်တန့်သွားစေပါတယ်။ ဒီ virus က VAX နဲ့ Sun Microsystems Morris အတွက် operation systems Unix ထဲမှာ error များ virusတွေ ပွားလာဖို့အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်...။ Unix ထဲမှ error များနဲ့အတူ virus က နဂိုမူရင်း idea ပေါင်းမြောက်များစွာကိုလည်း အကျိုးရှိရှိအသုံးချခဲ့ပါတယ်( ဥပမာ - User ရဲ့ Password များကို ရယူခြင်း)..။ Morris Virus ကြောင့် ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျငွေ ၉၆ မီလီယံ ဒေါ်လာ ဖိုးလောက် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်...။ ဒါကြောင့် CERT ( Computer Emergency Response Team) ကို ဒီလိုမျိုး တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် ဖြေရှင်းဖို့တာဝန် အပ်နှင်းခဲ့ပါတယ်...။
၁၉၈၈ ဒီဇင်ဘာလ : DECNet မှာ worm virus တွေဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေဆဲပါ ။ ယဉ်ကျေးသန့်ရှင်းတဲ့ out တွေ၊်image တွေအတူ user တွေကို "stop computing and haveagood time at home!!!" ဆိုပြီး မေတ္တာရပ်ခံတဲ့ HI.COM worm virus တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲ anti-virus program အသစ်တွေလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် ( ဥပမာ - ယနေ့ခေတ်တိုင် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်တဲ့ Doctors Solomon ရဲ့ Anti-virus Toolkit )...။
"Vacsina" ၊ "Yankee" တို့နဲ့ အုပ်စုတစ်ခုထဲဖြစ်တဲ့ "Datacrime" နဲ့ "FuManchu" ဆိုတဲ့ Virus အသစ်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၁၃ရက်နေ့မှာ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် နဲ့ အန္တရာယ်ကြီးမားစွာ ပေးခဲ့တဲ့ ပါတယ်။ ဒီ Virus က hard disk များကို format ချပစ်ပါတယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ hard disks ကို format ချလိုက်မှတော့ ရှိသမျှလေးတွေကုန်ပြီပေါ့... တစ်ခုကောင်းတာက အဲဒီ Virus လည်း format ချလိုက်တော့ ပျောက်သွားတာပါပဲ...။ဒါပေမယ့် သူရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုက ဟော်လန် နဲ့ ဗြိတိန်မှာ ရှိတဲ့ media အုပ်စုတွေကိုတော့ ရင်ဘတ်စည်တီး အော်ဟစ်လို့ ဒေါသပုန်ထစေခဲ့ပါတယ်..။
၁၉၈၉ စက်တင်ဘာလ : နောက်ထပ် Anti-Virus program တစ်ခုထပ်ထွက်လာပါတယ်...။ အဲဒါကတော့ IBM Anti-Virus ပါ။
၁၉၈၉ အောက်တိုဘာလ : DECNet မှာ နောက်တခါ virus ကူးစက်ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ worm virus ကတော့ "WANK Worm" လို့ခေါ်ပါတယ်။
၁၉၈၉ ဒီဇင်ဘာ : "AIDS" လို့ခေါ်တဲ့ "Trojan horse" တစ်ခု သောင်းကျန်းပြန်ပါတယ်။ "AIDS Information Diskette Version 2.0" ဆိုတဲ့ diskette အမှတ်အသားပေါ်မှာ copy ပေါင်း ၂၀,၀၀၀ ပို့လွှတ်ပါတယ်။ 90 boot-ups ပြီးတဲ့အခါမှာ ဒီ "Trojan" program က disk ပေါ်မှ file name များအားလုံးကို encode လုပ်ပစ်လိုက်ပြီး အဲဒါတွေကို မမြင်ရအောင် ဖျောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ file တစ်ခုထဲသာလျှင် ဖတ်လို့ရတော့ပါတယ်...အဲဒါကတော့ P.O Box 7, Panama ဆိုတဲ့ လိပ်စာအတိုင်း ၁၈၉ ဒေါ်လာ ပို့ပေးဖို့အတွက် ငွေတောင်းခံလွှာပါ။ ဒီ program ရေးတဲ့သူကို ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ထဲကို ပို့ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၈၉ မှာပဲ ရုရှားနိုင်ငံမှာလည်း "Cascade", "Jerusalem", "Vienna" တို့နဲ့ တူညီတဲ့ computer virus များ စတင်ပျံ့ နှံ့ လာပါတယ်။ ကံကောင်းစွာပဲ ရုရှား programmer တွေက အဲဒီ Virus တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ principle တွေကို လျှင်လျှင်မြန်မြန်ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီး ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ များစွာသော anti-virus တွေနဲ့ AVP တို့ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်...။
အပိုင်း ၂ ။ ၃ ။ ၄ ကို ဆက်လက်စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြပါရန်
Hacking Knowledge မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါတယ်